स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछि धकेल्न सकिन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ « प्रशासन
काठमाडौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछि धकेल्न सकिने बताएका छन् ।
आज (बुधबार) काठमाडौँमा एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले तीन वटा चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछि धकेल्न सकिने बताएका हुन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरुले पूरा कार्यकाल चलाउन पाउनुपर्ने माग राखिरहेको भन्दै उनीहरुको माग अगावै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नमिल्ने तर्क समेत उनले गरे ।
कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनिएमा सबैको कार्यकाल पनि सकिने र पहिलो निर्वाचन मितिले ६ महिनाभित्र पनि पर्ने हुनाले त्यसरी नै निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्दा सबैलाई मिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले के भनिरहेका छन् भने हाम्रो कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्या छ । तर असारको १४ गते भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनको त वैशाखमा चुनाव हुँदा त कार्यअवधि पाँच वर्ष नपुग्ने भयो । कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र भनेपछि ६ महिना नै हुनुपर्छ भन्ने भएन, त्यस हिसाबले सबैको कार्यकाल सकिने तर ६ महिना भित्र पनि पर्ने डेट निर्धारण गर्न गयौँ भने यो सबैलाई मिल्ने हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले तोकेकै मितिमा निर्वाचन हुने उनले दाबी गरे। उनले कतिपय व्यक्तिहरुले सत्तारुढ गठबन्धनको फुटको कामना गरिरहेको भए पनि गठबन्धन नफुट्ने दाबी गरे ।
निर्वाचन अघि वा निर्वाचन पछिसम्म नै कुनै न कुनै रुपको गठबन्धन कायमै रहने उनले स्पष्ट पारे ।
Tags : राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री स्थानीय तह निर्वाचन
22 May, 2022 11:07 am
प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी उपविदेशमन्त्री बीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा नागरिक
22 May, 2022 10:49 am
गृहमन्त्रीको गृहनगरमा काँग्रेस र एमालेबिच कडा टक्कर, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गृहनगर रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयरमा
22 May, 2022 10:21 am
७०३ पालीकाको नतिजा सार्वजनिक : कुन दलले कति पालीका जिते ?
काठमाडौँ । ‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९’ को मत परिणाम अन्तिम
22 May, 2022 9:34 am
धरान उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङको अग्रता कायमै
काठमाडौँ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङले